Ka Hor Kulanka London Derby, Halyaygii Hore Ee Arsenal Ee Ray Parlour Oo Soo Xushay Shaxda Isku Dhafka Arsenal Vs Tottenham. - Gool24.Net
Ka Hor Kulanka London Derby, Halyaygii Hore Ee Arsenal Ee Ray Parlour Oo Soo Xushay Shaxda Isku Dhafka Arsenal Vs Tottenham.
Kooxaha Arsenal iyo Tottenham ayaa axada iskaga hor iman doona kulan saamayn wayn ku yeelan kara kaalmaha hore ee Premier League iyada oo waliba Spurs haysata kalsoonidii ay ka soo heshay guushii waynayd ee ay Chelsea ku soo khaarajisay.
Tottenham ayaa ku jirta kaalinta saddexaad ee Premier League kadib markii ay guul ka gaadhay Chelsea waxayna doonaysaa in ay booskan sii xajisato laakiin Arsenal oo kaalinta shanaad ku jirta isla markaana halka dhibic ka hoosaysa Chelsea ayaa doonaysa in ayna dhibco kala lumin si ay kaalmaha sare ugu sii dhawaato.
Markasta oo la ciyaarayo kulan Derby ah ama kulan wayn waxaa markasta la soo xulaa shaxda isku darka labada kooxood, waxaana arintan ugu horayn sameeyay khabiirka kubbada cagta ahna halyaygii hore ee Arsenal ee Ray Parlour.
Ray Parlour oo ka mid ah khabiirada kubbada cagta talkSPORT isla markaana wargayso kale wax ku qora ayaan wax naxariis ah u samayn kooxdiisii hore ee Gunners isaga oo markii uu soo xulanayay shaxda isku dhafka Tottenham iyo Arsenal ku saleeyay xidigaha ugu qaab ciyaareedka fiican oo kaliya.
Ray Parlour ayaa todoba ka mid ah 11 ka xidig ee shaxdiisa ku jira waxa uu ka soo doortay kooxda Tottenham ee uu hore ula soo xifitami jiray halka afarta ciyaartoy ee kale uu ka soo doortay kooxdiisii hore ee Gunners.
Aan ku bilawnee Ray Parlour ayaa goolhayaha shaxda isku darka Arsenal iyo Tottenham u soo dorotay Hugo Lloris wuxuuna difaaca dhexe u soo wada xushay Alderweireld iyo Vertonghen oo Tottenham ka wada tirsan isaga oo difaaca bidix ka soo doortay Arsenal waxaana ku jira Nacho Monreal halka difaaca midig uu u soo xushay Trippier.
Ray Parlour ayaa dhexda danbe ee burburiyaha u soo xushay xidiga saamaynta badan Gunners ku yeeshay Torreira waxaana khadka dhexe kaga horeeya Dele Alli iyo Christian Eriksen oo Tottenham bandhig cajiib ah u samaynaya.
Safka weerarka shaxda isku darka Arsenal iyo Tottenham ee Ray Parlour waxaa ka soo wada muuqday Lacazette iyo Aubamayeng oo Arsenal ka wada tirsan iyo Harry Kane oo ah hogaamiyaah Spurs.
Halkan kaga bogo Qaabka Shaxda Isku Dhafka Ee Tottenham iyo Arsenal Ee Ray Parlour:
Haddaba akhriste miyad filaysaa in ay shaxdani tahay shaxdii ugu fiicnayd ee laga soo xulan karayay kooxaha Arsenal iyo Tottenham? Haddii shaxdan kulan soo wada gali lahayd miyayna kooxaha Premier league dhibaato badan ku abuurteen?